Downloads 10 872
Mpanoratra: Modely: Michel Migaud, Cyril Breton, Mpiady avy amin'ny fiaramanidina: Jean-Pierre Bourgeois, Benoit Dubé, Panel et gauges: Jean-Pierre Langer, Arne Bartels, Textiel: Michel Migaud, Painture: Cyril Breton, lahy: Maurice Rancourt
Small tokan-tena motera fiaramanidina ampiasain'ny fahazavana fiaramanidina ho any amin'ny tafika sy ny Air Force (frantsay).
Ny asa fitoriana: Mifandray sy Training, Aerial Photography, Medical fanangonana, entana, Towing lasibatra, Electronic Countermeasures, miparitaka NBC Simulation, Fanaraha-maso sy ny polisy avy eny ambony Coastal Fanaraha-maso, Calibration, Voatifitra anti-havandra bala afomanga
TBM 700, ny tany am-boalohany hevitra. Tamin'ny faramparan'ny 80s, SOCATA injeniera dia nomena ny asa famoronana am-boalohany ny foto-kevitra eto amin'izao tontolo izao ny mazava fiaramanidina. Ny hevitra dia ny hanambatra ny mora raisina sy ara-toekarena maotera tokana miaraka amin'ny hery sy azo itokisana ny turboprop. Multi-asa fitoriana fiaramanidina, 6-7 seater pressurized, SOCATA TBM 700 tonga ny fanatanterahana ny Maro ny hevitra ambony sokajy.
Add-on tena Tsara izany, ry tsara endrika, miaraka amin'ny zava-misy lafiny sy 3D anatiny mba hampitana voarakitra ao amin'ny tena Socata TBM700.
A dia tsy maintsy manana!